“Dhaawaca Mohamed Salah ayaa qeyb weyn ka qaadatay in Real Madrid ay ku guuleysato Champions League”… Wijnaldum – Gool FM
“Dhaawaca Mohamed Salah ayaa qeyb weyn ka qaadatay in Real Madrid ay ku guuleysato Champions League”… Wijnaldum
(Liverpool) 27 Maajo 2018. Georginio Wijnaldum ayaa wuxuu xaqiijiyay in bixitaanka Mohamed Salah ee kulankii Real Madrid ee finalka Champions League ay kaalin weyn ka qaadatay in ay lumiyaan koobka. Isgoo dhinaca kale carabka ku adkeeyay in Reds ay qaadatay xili ciyaareedkan cajiib ah, isla markaana ay u qalanto sharaf iyo xusuus gaar ah.
Mohamed Salah ayuu dhaawac kasoo gaaray dhanka garabka bidix, kadib markii waxyeelo xoogan uu u geestay difaca kooxda Real Madrid Sergio Ramos daqiiqadii 25aad ee qeybtii hore ciyaarta, taasoo sababtay inuu ka dhaqaaqo garoonka, waxaana lagu badalay Adam Lallana.
Wijnaldum ayaa kulanka kadib la hadlay saxaafa wuxuuna yiri: “La jooga Mohamed Salah aad ayaan u fiicanahay, waxa walba wuxuu inooga dhigaa wax fudud, marka uu garoonka ka baxay, wax walba wey isbadaleen”.
“Waxaan kulanka kaga bilaawanay si wanaagsan, waxaan sameenay fursado dhowr ah. Laakiin bixitaanka Mohamed Salah, wax walba aad ayay inoogu adkaadeen”.
“Xaqiiqdii aad ayaan u niyad jabay, laakiin hadii aan isbarbardhigo waxa aan qabanay xilli ciyaareedkan iyo kii lasoo dhaafay, waa inaan ku faanaa, waxaan rajeenayaa inaan wax ka baran doono meesha aan gaarnay xili ciyaareedkan, si aan kaga faa’ideysano xili ciyaareedka xiga”.
Ronaldo oo sheegay inaysan Lacag iyo Mushaar ahayn waxa ay isku heystaan Real Madrid...(Haddaba maxay tahay??)
RASMI: Shaxda sanadka ee Champions League oo la soo saaray (Real Madrid oo xiddigaha ugu badan ku leh)